Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Android ne-iPhone zama-smartphone, amathebulethi, ama-iPad
Uma ufuna i- zakamuva izindaba kanye nokubuyekezwa ku izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zefoni noma ithebhulethi yakho, bese ufika endaweni efanele. Lapha e-Foro KD, sizokugcina unolwazi lwakamuva ngakho konke ukukhishwa kwezinhlelo zokusebenza zakamuva futhi sikunikeze umbono wethu othembekile wokuthi yiziphi ezifanele isikhathi sakho. Kungakhathaliseki ukuthi ungumsebenzisi we-iOS noma we-Android, siyakukhava. Ngakho hlola futhi kaningi ukuze uthole zonke izindaba zakamuva zohlelo lokusebenza nezibuyekezo!
Ezinye izinhlelo zokusebenza zidizayinelwe ukwenza impilo ibe lula, kanti ezinye zidalelwe ukujabulisa noma ukwazisa. Ngenjwayelo, izinhlelo zokusebenza zingamathuluzi awusizo ngendlela emangalisayo asize abantu baphathe izimpilo zabo ngezindlela ezahlukahlukene.
Bangenza izimpilo zethu zibe lula futhi zisebenze kahle, ngokusinikeza ulwazi namathuluzi esiwadingayo lapho sisohambeni. Bangasisiza futhi ukuthi sihlale sixhumene nabangane bethu nomndeni, ngokusinikeza indlela yokuhlala sithintana ngenkathi sisendleleni. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo zokusebenza zeselula zingasisiza uhlale unempilo futhi ufanelekile, ngokusinikeza ulwazi namathuluzi okulandelela owethu inqubekelaphambili yokufaneleka kanye nemigomo.
Iluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokubala wehla lobuhle?
Iluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwe-countdown timer oluzwakalayo?
Iluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lwe-sobriety countdown?
Iluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokubala we-anime?
Iluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokubala wehlisa isisindo?
Iluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokumba i-faceaway countdown?